Loolanka siyaasadeed ee Xasan Sheekh iyo Cumar C/rashiid, iyo jawaabta ay madaxtooyadda bixisay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Loolanka siyaasadeed ee Xasan Sheekh iyo Cumar C/rashiid, iyo jawaabta ay madaxtooyadda bixisay
Madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hor-timid hadal uu maalintii shalay ka dhawaajiyay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, taas oo ku saabsanaa in is-bedel lagu sameeyo hogaanka sare ee dalka.
War-qoraal ah ee uu soo saaray sii-hayaha agaasimaha warfaafinta madaxweynaha Soomaaliya Shadoor Xaaji ayaa lagu sheegay in ra’iisul wasaaraha ay ku haboon yahay inuu ilaaliyo anshaxa doorashooyinka iyo mas’uuliyadda uu weli dalka u haayo.
“Waxaa wanaagsan inuu ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ilaaliyo anshaxa doorashooyinka iyo mas’uuliyadda wali uu u haayo dalka ee ra’iisul wasaarenimo, ma wanaagsana inuu ololaha doorashadiisa shaqsiyadeeyo” Sidaas waxaa war-qoraal ah ku yiri agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Shadoor Xaaji Maxamuud.
Dhinaca kale, agaasimaha ayaa difaacay waxqabadka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo uu sheegay inuu u taagan ahay difaaca qaranimada dalka iyo diidmada fara-gelinta shisheeye.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa dhawaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ka sheegay in dalku uu u baahan yahay in is-bedel lagu sameeyo hogaanka sare, wuxuuna sheegay in fashil weyn ku dhacay hogaanka dalka oo keenay is qabsi ra’iisul wasaareyaal fara badan.